သတင်းအစုံအလင်ပါ-December 08,10 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သတင်းအစုံအလင်ပါ-December 08,10
Posted by ဂျစ်စူ on Dec 8, 2010 in Myanma News, News, Think Tank, World News |5comments
အားတော့နာပါတယ်..ဒီပို့ စ်လေးထဲမှာပဲ နောက်ထပ် Latest News လေးတွေ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါ။တိုလီမုတ်စ သတင်းများဖြစ်ပါတယ်။ချင့်ချိန်စဉ်းစားပြီး ယုံချင်ယုံ၊မယုံချင်လဲနေကြပါခင်ဗျာ။ယုံပါလို့ လဲ ပြောဘူး၊မယုံနဲ့ လို့ လဲ ပြောချင်ဘူးနော်။ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ်၊ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ပါခင်ဗျ၊
1-၀ီကီလိခ် တာဝန်ခံကို လန်ဒန်မှာ ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီ
ဆွီဒင်နိုင်ငံက ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားတဲ့ ၀ီကီလိခ် (WikiLeaks) ၀က်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာကို တည်ထောင်သူ ဂျူလီယန် အာဆန်းရှ် (Julian Assange) ကို ဒီကနေ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ကို မုဒိမ်းမှု၊ ကလေးငယ်တွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်မတရား လုပ်မှုနဲ့ အတင်းအဓမ္မ ဖျားယောင်း သွေးဆောင်မှုတွေအတွက် ဆွီဒင်အစိုးရက အလိုရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဒီစွပ်စွဲမှုတွေကို ငြင်းဆိုပါတယ်။
အခုလို သူ့ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက် ဗြိတိသျှ ရဲတွေနဲ့ ပြောဆိုနေတယ်လို့ ဂျူလီယန် အာဆန်းရ်ှရဲ့ ရှေ့နေက မနေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံကနေ သူ့ကို အမေရိကန်နိုင်ငံကို ပြန်ပို့နိုင်တာမို့ ဒီကိစ္စအတွက် သူ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ လုပ်နေပါတယ်လို့လည်း ရှေ့နေဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။
၀ီကီလိခ် ၀က်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာတွေကနေ အမေရိကန် သံတမန်တွေရဲ့ ထိပ်တန်း လျှို့ဝှက် ဆက်သွယ် ပြောကြားချက်ပေါင်း ၂၅၀,၀၀၀ လောက် ပေါက်ကြားခဲ့ပါတယ်။
1.2-WikiLeaks chief refused bail
Bangkok Post မှာ ဆက်ဖတ်ပါ
2.အရေးကြီးတယ် ဆက်ပြီး share ပေးပါ
aungsansukyi.youth@gmail.com add လာပါက
ခင်ညွန့်အပိုင်း ၃ ဆြိုပီး zip ဖိုင်နဲ့ပို့လာတာဟာ VIRUS ပါ
ကွန်ပျူတာကိုလုံးဝ ပျက်သွားစေပါတယ် လုံးဝဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့
3-ဆုံဆည်းရာ၊ ၈ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၀
နံနက်(၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်) နအဖ စစ်တပ် တပ်ရင်း ၂၃၀ မှ စစ်သားတွေက နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ဖလူးကျေးရွာ ပြောင်းဖူးဂိတ်အနီးတွင် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ကေအဲန်ယူ/ ကေအဲန်အယ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ တပ်ရင်း ၇၇၇ က ရဲဘော် ၆ ဦးရဲ့အလောင်းကို ပလောတပို့ရွာနှင့် မနီးမဝေး ပြောင်းခင်းတခင်းတွင် တွေ့ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ နအဖ စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးပစ်သတ်ခံရသည့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ဦးမှာ စောပီလင်း၊ စောနိုင်းနိုင်း၊ စောအ၀င်း၊ စောထူးထူး၊ စောရန်ကုန်နှင့် စောသံခဲတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
4-မဲ့ကူကင်းရွာမှာရှိတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက နေရပ်ပြန်ခိုင်း
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျား…“ကူညီတယ်၊ ကယ်ဆယ်တယ်၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတယ်” စသဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးစာမေးပွဲ ကြီးမှာ အမှတ်ပြည့်နီးပါးရခါနီးတဲ့ ထိုင်းစစ်တပ် အပါအ၀င် ထိုင်းပြည်သူ့စစ်၊ ထိုင်းဒေသခံ မြို့စောင့်တပ်ဖွဲ့၊ ထိုင်းအာဏာ ပိုင် အဖွဲ့အများဟာ ငါ့သမီး လေးတော်လှချည့်၊ ယောက်မမြင်း စီးထွက်ဆိုသလို၊ လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့ကြပါပြီ။
ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ မဲ့ကူကင်းရွာ ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းထဲကလက်ရှိ နေထိုင်သူ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ လောက်ကို ဒီကနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ထိုင်းစစ်တပ် ညှိနှိုင်းပြီးပြီ၊ ဒါကြောင့် နေရပ်ရင်း ကျေးရွာတွေကို ပြန်လို့ရပြီ ဘာညာနဲ့ ဆက်သွယ်ဖြစ်ကြပုံရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ၁၂ နာရီမှာ မဲခေါင်ကင်းရွာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကနေ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ က အထုပ်အပိုးကိုယ်စီနဲ့ သောင်ရင်းဖြစ်ကမ်းနား ၁၀-ဘတ်ဂိတ် ကိုပဲ ဆင်းခါရှိသေး တယ်။ ၁၂း၃၀ နာရီမှာ ဖလူးလေးရွာဘက်က လက်နက်ကြီးသံတချက်ကြားရပြီး ရေ လယ်ကိုရောက်နေတဲ့ စက်လှေတွေကလည်း အခုပဲ နောက်ပြန်လှည့်ရတော့ မလိုလို၊ ၁၀-ဘတ်ဂိတ် ကူတို့ဆိပ်မှာ ထိုင်းစစ်တပ်ခြံရံပြီး လိုက်ပါလာတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ မှာလည်း အထိတ်တလန့်နဲ့ ပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်အပေါ် နားလည်သွားပုံရှိတဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာ မွန်း လွဲ ၁း၃၀ နာရီကစပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအနီးက ၀ပ်မဟာဝုန်ဘုန်းကြီးကျောင်း နဂါး နှစ်ကောင်ကျောင်း အတွင်းမှာရော၊ အပြင်မှာပါ ရစ်သီရစ်သီနဲ့ မြန်မာပြည်ဘက်ကမ်း ဖလူးလေးရွာ၊ မင်းလက်ပန်ရွာတွေဆီ မပြန်ဘဲ နေကြသူတွေကို ပြန်ခေါ်ပါတယ်။
ကဲ… ပြောတဲ့စကားက ကြည့်ပါဦး။ ဟိုဘက်ကမ်းမပြန်ရဲ့တဲ့သူတွေ၊ စခန်းထဲပြန်ဝင်ကြတဲ့ ခင်ဗျ။
ဒီလိုနဲ့ လူ ၃၀၀ လောက်ပြန်လာကြပြီး လူ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အထဲက လူ ၃၀၀ လောက် ပဲ ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာ လက်ရှိ ရှိပါတော့တယ်။
သတင်း၊ ဓါတ်ပုံ JACBA
“လေယာဉ်က လေဆိပ်ကို ဆင်းတုန်း ပြေးလမ်းပေါ်မှာ ဘရိတ်ဖမ်းလို့မမိတော့တဲ့အတွက် ပြေးလမ်းပေါ်ကနေ ညာဖက်ကိုကွေ့ပြီးပြေးလမ်းဘေးမှာရပ်လိုက်ရတာတဲ့။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေ မရှိဘူးလို့တော့ ကြားတယ်။ နံနက် ၁၀ နာရီလောက်ကဖြစ်တာပါ” ဟု လေဆိပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ကြားဖြတ်သတင်း၊ ၊စစ်ဘက်နယ်ဘက် အရာရှိ များ ပြည်ပထွက်ခွာခွင့် ခေတ္တရပ်ဆိုင်း(နေပြည်တော်)
တိုင်းမဂ္ဂဇင်း ၏ တစ်နှစ်တာ ထူးခြားမှု အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဆုရွေးချယ်ခံရရန် တစ်ပြေးနေသည့် ၀ီကီလိခ် တည်ထောင်သူ ဂျူလီယန် အဆန်ငယ်(ယခု တစ်ပတ် ထုတ် Time မျက်နှာဖုံး)
၀ီကီလိခ် က နိုင်ငံတကာရှိ အမေရိကန် သံရုံးကြေးနန်း စာများ သတင်း ပေါက်ကြားမှုတွင်
ရန်ကုန် မြို့ ရှိ အမေရိကန် သံရုံးမှ ကြေးနန်း ၈၀၀၀ ကျော် ပါဝင်သည် ဖြစ်ရာ အမေရိကန်
သံရုံး နှင့် လှို့ ဝှက် ဆက်စပ် မှု ရှိသည့် မြန်မာ စစ်အရာရှိ အချို့ ပျောက် ဆုံးနေသည် ဟု
Freedom News Group မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Embassy of Phenom pen (ကမ္ဘောဒီးယား ) ကြေးနန်း ပေါက်ကြားမှု တွင် အမေရိကန်
သို့ တိတ်တဆိတ် သတင်းပေးသည့် ခမာ စစ်အရာရှိ အချို့ ကို ဖော်ပြထားသည်။
ထပ်မံ ပေါက်ကြား နိုင်သည့် Embassy of Rangoon ကြေးနန်း တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံ
ဉ် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံ ခွင့်ရရှိရန် ကြိုးစား ခဲ့ဖူးသည့် မြန်မာ စစ်ဘက် ၊နယ် ဘက်အရာရှိ
အချို့ အကြောင်း ပါဝင် နိုင်သည် ဟု မြန်မာ ၀ီကီလိခ် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၀ီကီလိခ် က မူ ကာယကံ အရှင် အချို့ ဒုက္ခရောက် နိုင်သည့် နာမည် များ ကို ဖျောက်
ဖျက် ပြီး မှ သာဖော်ပြသည်။၀ီကီလိခ် တည်ထောင်သူ ဂျူလီယန် အဆန်ငယ် သည်
TIME မဂ္ဂဇင်း က နှစ် စဉ် ရွေးချယ် သည့် Person of the Year ကို ရရှိ ရန် အလားအလာ
Ref:Freedom News Group
ဟုတ်လို့ လား ? ကျမ add ထားတာ ဘာ မှ မဖြစ်သလို ပဲ.. အဒါ တမင် အဒိ account ကို လူတွေ မ add အောင် လုပ်တာများလား ထင် တာ ပြောတာနော် မယုံရင် test account နဲ့add ပြီး test ပေါ့
daw su’s acc ဆိုလဲ ဒေါ်စုက အနော်တို့ ကို လိုက်အဒ် မလားဂျာ
အနော်တို့ က အဒ်မှရမှာပေါ့ ဟုတ်ဝူးလား
လုံးဝလက်မခံပါနဲ့ လို့ တော့ပြောတာပဲ…
Add လာလဲ Don’t care ပဲ
Google acc ဆိုတာ နလပိန်းတုန်း ချီးပေတွေဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာသိကြစမ်းပါ..ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညံ့ရင်တော့ ခံကြယုံပေါ့
သတင်းတွေစုံလွန်းတော့ လည်သွားပီ ဒေါ်စုအကောင့်ကတော့စဉ်းစားစရာပဲ @_@ !!!!